Qancinta Shaqsiga iyo Xeer Jajabka oo ka xoog badan awoodaha Dastuurka (Faallo) – Banaadir Times
By banaadir 15th August 2018 171 No comment
Ma jiro Qodob Dastuuri ah oo Jubbaland u ogolaanaya inay soo celiso dhamaan saraakiisha amaanka ee dowladda dhexe ay magacowdo, una dirto deegaanada Jubbaland, laakiin dastuurka wuxuu u ogolaanaya maamulada dalka in lagala tashado arrimaha kaalmadda caalamiga, ganacsiga, siyaadda iyo arrimaha dhaqaalaha dalka.
Jubbaland iyo Dowladda Federaalka, ayaa u muuqdo kuwo khilaafkooda xoogaysan karo, Kismaayo waxaa ka shaqeeya amarka madaxweyne Axmed Madoobe, dowladana maka dhaqan gelin karto amar laga soo saaro madaxtooyadda Somalia.
Heshiisyadda hoose oo shaqsiyaadka hogaanka ka haya dowladda Federaalka iyo maamuladda ay gaaraan, ma ahan kuwo shacabka lala wadaago, sababtoo ah waxaa lagu xaliyaa si hoose khilaafyada taagan iyo sida looga gudbi lahaa, laakiin lama eego kuwa xiga in Dastuurka lagu xalin doono iyo in Xeer Jajab iyo Qancin Shaqsiyadeed lagu xalin doono.
Gen Bogmadow, ayaa horey Jubbaland ay kaga cilisay magaalada Kismaayo, Bogmadow waxaa uu watay ciidamo ilaali u ahaa, taasi oo qasabtay inaan la xirin laakiin garoonka ayaa laga soo celiyay.
Saraakiisha NISA iyaga oo xogtooda la hayo ayay Boorsooyin u muuqday kuwoda shaqada ama dharkooda u muuqday kala dageen Kismaayo.
Ma waxaa Somalia lagu maamulaa Qancinta shaqsiyaadka awooda siyaasadeed ku leh deegaanada ay maamulaan, mase waxaa lagu dhaqmaa dastuurka oo KMG ah una baahan in wax badan laga badalo.